Zikuphatha kanjani izindaba ze-Ugu Jazz | News24
Zikuphatha kanjani izindaba ze-Ugu Jazz
LEZI izinsuku lapho abantu abaningi abahambela lomcimbi omkhulu kakhulu eSouth Coast owaziwa nge-Ugu Jazz Festival sebezilungisela, bethenga amatikithi, amajazi kanye nenqephu abazoyi gqhoka ngobusuku be-Jazz. Kulonyaka abaningi bashaqekile ukuzwa ukuthi lomcimbi omkhulu kangaka kungezeka ungabi khona.
Umkhandlu woGu wona usho ngokugcwele ukuthi lomcimbi uhlehlisiwe ngenxa yezizathu ezithile. Umhleli womcimbi usewuhlele iminyanka eyisikhombisa uMnuz Siyabonga Msomi weCyassounds uthe angeke abenzele phansi abathandi beJazz uzowenza lomcimbi. Iphephandaba liphumele ngaphandle labuza ukuthi abalandeli bazizwa kanjani na?
LEZI izinsuku lapho abantu abaningi abahambela lomcimbi omkhulu eSouth Coast owaziwa nge-Ugu Jazz Festival sebezilungisela, bethenga amatikithi, amajazi kanye nenqephu abazoyi gqoka ngobusuku be-Jazz.
Kulonyaka abaningi bashaqekile ukuzwa ukuthi lomcimbi omkhulu kangaka kungezeka ungabi khona.
Umkhandlu woGu wona usho ngokugcwele ukuthi lomcimbi uhlehlisiwe ngenxa yezizathu ezithile. Umhleli womcimbi osewuhlele iminyaka eyi-7 uMnuz Siyabonga Msomi we-Cyassounds uthe ngeke abenzele phansi abathandi be-Jazz uzowenza lomcimbi. Iphephandaba i-Fever libuze abalandeli ukuthi bazizwa kanjani na?